बन्द गर्न सक्दैन!
प्रश्न बन्द गर्न सक्दैन!
7 महिना3सप्ताह पहिले #1245 by SkipperLP
त्यसैले मेरो P3D v3 मा मैले केही हवाई जहाज र स्नेहनहरू स्थापित गरेको छु।
स्क्यानरिसहरू राम्ररी काम गर्दै तर मैले मैले स्थापना गरेका सबै विमानहरू ठीकसँग काम गर्दैनन्।
म वैधानिक बन्द गर्न सक्दैन ... वा जब म बन्द हुन्छ, रनवे पछि मात्र माइल।
मैले मेरो संवेदनशीलता अधिकतम र "नजिक शून्य चीज" (मलाई यो के भनिन्छ यकीन छैन कि Sry निश्चित छैन) मा सेट गर्न को लागी। र अधिकतम ... केहि पनि परिवर्तन भएन।
हावामा नियन्त्रण नियन्त्रणहरू (या साँच्चै गाह्रो) काम गर्दै छन्।
जमीनमा बसोबासहरू पूर्ण रूपमा काम गर्छन्।
Prepar3d बाट पूर्व स्थापित विमानस्थलको साथ सबै कुरा राम्रो काम गर्दछ।
कुनै पनि एक indea?
मद्दतको लागि धन्यवाद
7 महिना3सप्ताह पहिले #1247 by SkipperLP
अपडेट: फेला पर्यो कि यी जॉबहरूका लागि मेरो जोस्टिक अत्यन्त गलत क्यालिब्रेटेड छ। 1 मा "निल जोन" सेट गर्नुहोस् र यो राम्रो भयो।
मेरो जोस्टिकले नल जोन 1 मा पूर्ण अक्षको अन्त सम्म पुग्दैन।
मेरो कुञ्जीपाटीले सबै काम गर्दछ।
6 महिना4सप्ताह पहिले #1288 by gaztop
अधिकतम वजन विमान खाली गर्न समायोजन गर्नुहोस्। त्यसपछि कम से कम फ्लप संग लेने को कोशिश करो।
यदि तपाईंले मैदान बन्द गर्नुभयो भने, समस्या वजन थियो।
6 महिना3सप्ताह पहिले #1295 by JackRiordan
1) विन्डोज 10 खोजी पट्टीमा, टाइप गर्नुहोस् नियन्त्रकमा। विकल्प सेटअप USB गेम नियन्त्रकहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। यन्त्रहरू र प्रिन्टर मेनु तलको यो विन्डोज नियन्त्रण प्यानलमा यो विकल्प पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
2) यदि तपाइँ नियन्त्रक वा जोस्टिक सूचीबद्ध छ भने, क्लिक गर्नुहोस् यसलाई क्लिक गर्नुहोस् गुणहरू। गुणहरूमा, सेटिङ ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। क्यालिब्रेट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंको उपकरण क्यालिब्रेट गर्न निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
3) आफ्नो उडान सिम्युलेटर खोल्नुहोस्। आफ्नो विकल्प मेनुमा जानुहोस्। तपाईंको अक्ष असाइनमेन्टमा जानुहोस्। ए एक्सिलन एक्सिसमा आफ्नो एक्स एक्स असाइन गर्नुहोस्। लिफ्ट अक्षमा तपाईंको वाई अक्ष असाइन गर्नुहोस्। यसलाई रिवर्स गर्न बाकस जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्, त्यस तरिकाले छडीमा फर्केर हिँड्ने विमानको पिच (नाक) उठाउँदछ। तपाईँका रुडहरू असाइन गर्ने कुनै पनि अन्य बटन वा यन्त्रमा जुन तपाईले रूडका लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
4) क्यालिब्रेसन मेनुमा जानुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि उडान मोड सामान्यमा सेट गरिएको छ। पूर्वनिर्धारितमा तिनीहरूलाई रिसेट गर्नुहोस्। विमान उडान गर्न प्रयास गरेपछि, यी मानहरूलाई आवश्यक अनुसार समायोजन गर्नुहोस्।
5) उल्लेख गरिएको Gaztop को रूपमा, तपाईंको ईन्धन र प्वाइलोड मेनुमा जानुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं धेरै धेरै ईन्धन वा कार्गो लिइरहनुभएको छैन।
6) टेकओफ भन्दा पहिले, यो विमानको लागि एक चेकलिस्ट पछ्याउने सबै भन्दा राम्रो हो। यदि तपाइँसँग एक छैन भने, गुगल एक, र यसलाई पछ्याउनुहोस्।
7) यदि तपाइँ ट्राफिक गर्न सक्नुहुन्छ भने, तर आफैले नाक राख्न को लागी आफैँलाई फिर्ता तुरुन्तै फर्केर जान्छ, तपाईले लिफ्ट ट्रिम (डाउन) र लिफ्ट ट्रिम (अप) को लागि कुञ्जीहरू असाइन गर्न आवश्यक छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ अधिकतम मा दोहोर्याउनु हुन्छ ताकि तपाईं केवल बटन ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ।
2 महिना3सप्ताह पहिले #1377 by Luciad10
SkipperLP ले लेखेको: UPDATE: फेला पर्यो कि यी जॉर्जहरूका लागि मेरो जोस्टिक अत्यन्त गलत क्यालिब्रेटेड छ mutuelles TNS । 1 मा "निल जोन" सेट गर्नुहोस् र यो राम्रो भयो।
तर तपाईं जोस्टिकलाई विभिन्न हेरफेरहरूको लागि उपयुक्त नभएसम्म जोस्स्टिकको लागि पनि अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ।